WWW.FIDULINK.COM > Fampahalalana momba ny fananganana orinasam-pifandraisana an-tserasera na any ivelany manam-pahaizana amin'ny Internet amin'ny famoronana orinasa an-tserasera > Fialofana teknolojia sy hetra Fifanarahana momba ny hetra G7 manan-tantara
Etazonia, Great Britain, France, Alemana ary firenena hafa nanatrika ny G7 ny sabotsy dia nahavita fifanarahana miavaka iray hisintona vola bebe kokoa amin'ireo orinasa iraisam-pirenena toa ny GAFAM ary hampihena ny fandrosoan'izy ireo hamindra ny tombom-bidin'izy ireo amin'ireo seranan-tsambo kely any ivelany.
Ny lalàna mifehy ny hetra manerantany amin'izao fotoana izao dia nanomboka tamin'ny taona 1920 ary miady amin'ireo goavam-be teknolojia iraisam-pirenena izay mivarotra lavitra ny serivisy ary manome ampahany betsaka amin'ny tombom-barotra azon'izy ireo amin'ny fananana ara-tsaina voatanana ao amin'ny faritra hetra ambany.
Haba farany ambany 15%
Toerana mendrika kokoa an'ny firenena izay andoavan'ny orinasa ny haba
Ny antsipiriany manan-danja dia mijanona ho fifampiraharahana mandritra ny volana vitsivitsy. Ny fifampiraharahana tamin'ny sabotsy ihany no nilaza fa ny “orinasa lehibe iraisam-pirenena lehibe sy mahasoa indrindra” ihany no voakasik'izany.
Ny G7 dia misy an'i Etazonia, Japon, Alemana, Great Britain, France, Italia ary Canada. Mitandrema ihany anefa fa ity fanambarana mafy ity dia miorina amin'ny fotoana fohy ihany amin'ireo firenena nanatrika ity fivoriana ity ary izao tontolo izao dia tsy ahitana firenena 7 fotsiny. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana anay dia mety tsy hahomby raha tsy misy fifanarahana manerantany. Amin'izao fotoana izao dia io ihany no vokatry ny fanambarana.
Mamorona ny tranokalanao!
Mamorona ny tranonkalanao Androany! Miaraka amin'ny FiduLink Hosting! Mora sy haingana izy io. Fanohanana ho an'ny mpanjifa Misokatra 24/24 sy 7/7.
2021 (C) Zo rehetra voatokana.
Hifandray aminao tsy ho ela izahay.
Atombohy amin'ny FiduLink.
Mpisolovava, mpitan-kaonty, banky, mpanolotsaina ...
Midira amin'ny Network
Mpisolovava, mpitan-kaonty, mpanolo-tsaina manatevin-daharana ny tambajotranay